BEING HUMAN | काव्यालय
BEING HUMAN | SATURDAYकलम | Kavyalaya - काव्यालय
by युनेश August 8, 2020
जसरी विलीन छ हावा प्रकृतिमा, जसरी विलीन छ सूर्यको प्रकाश, त्यसरी नै विलीन हुन मन लाग्यो मलाई । हराइजाऊँ कतै, लुकिजाऊँ, बिलाएर पुगौँ क्षितिजपारि…यस्तै यस्तै भावनाले ग्रसित पार्न थाल्यो मनलाई । यस्तो अभिरुचि खेलिदिनुको कारण मेरो एक्लोपना हुन सक्थ्यो । मेरा अन्य मित्रजनहरू कतै न कतै पुगिसकेका थिए, सुहाउँदी बधू खोजेर घर बसाइसकेका थिए । बाँकी थिएँ म । मात्र म । घरजम गरौँ, यस्तो इच्छा नपलाएको होइन अपितु मेरो उदेश्य, मेरो इच्छा त्यो भन्दा धेरै ठूलो थियो, महत्त्वपूर्ण थियो । मलाई मान्छे हुनु थियो । त्यसैले मैले यस्ता अभिरुचिहरूलाई फुत्तै कतै मिल्काइदिएर केवल आफ्नो उदेश्यमा केन्द्रित हुन आवश्यक थियो ।
हामीहरू घुम्न गएका थियौँ, चौतारोमा रे । आजभन्दा अगाडि म यसरी घुम्न निस्किएको थिइनँ । ‘कुर्र……कुर्र…’को मधुर आवाज कण्ठबाट बजाउँदै म छेवैकी परेवीलाई फकाउने प्रयासमा थिएँ । उसैको वरिपरि डुलिरहेको थिएँ । मेरा साथीहरू पनि सोही काममा व्यस्त थिए । चौतारोको रुखले घाम छेकिदिएकै थियो, हावाहरूले लहलह बनाएका पातहरू झरी पुष्पको काम गरिरहेकै थिए । त्यतिकैमा, छर्र…..कसैले केही छरिदियो । परेवीका साथसाथै मेरा साथीहरू छरिएको त्यही सामान वरिपरि पुगे । टल्क्क परेको आफ्नो चुच्चोले भुइँ ठुङ्न थाली परेवी । त्यसै गरे मेरा साथीहरूले पनि । चामलका दाना रहेछन् । सत्यानास होस् त्यसको जसले यसरी चामलका दाना छरिदिएर मबाट मेरी हुनै लागेकी दुलही छिन्यो । हेरेी, ‘अजिबो-गरिब’ प्राणि हाम्रो सामुन्ने उभिएको थियो ।
घर फर्किने बेलामा मैले साथीलाई सोधेँ –
“अघि हामीलाई चामल दिने कुन जन्तु हो ?”
“कुर्र..कुर्र..देखेको थिइनस् अहिलेसम्म ? मान्छे हो मान्छे !”
मान्छे । कस्तो जीव हो यो मान्छे भनेको ? एउटी परेवीलाई आकर्षित गर्न हामिले पसिना काढ्नु पर्ने, मान्छेले भने चामलका दाना छरिदिए पुग्ने ? परेवी मात्र किन अरु परेवा पनि आकर्षित गर्न पो सक्दो रहेछ यो मान्छेले । मलाई एकाएक मान्छेदेखि इर्ष्या जागेर आयो । मान्छे हुन पाए ! योभन्दा अगाडि मलाई बाघ हुन मन थियो, सर्प हुन मन थियो, चिल हुन मन थियो, धेरै कुरा हुन मन थियो तर मान्छे हुन मन थिएन । कारणः मान्छे हुन्छ, यो ज्ञान मलाई थिएन । मैले मान्छेलाई देखेकै थिइनँ । मान्छे त साह्रै काइदाको जीव रहेछ । अहो, मान्छे हुन पाए !
सो घटनाको केही दिनपश्चात, म आराम गरिरहेको थिएँ । केही पर, हातमा लठ्ठि बोकेर बाँदरहरू सलबलाउन थाले । नियालेर हेरेँ, रंगिबिरंगी बाँदरहरू दुई खुट्टाले हिँडिरहेका थिए । ओहो ! ती बाँदर रहेनछन्, ती त मान्छे थिए । दुई खुट्टाले नहिँडेका भए झुक्किएकै थिएँ नि । अल्छिलाग्दो गतिमा केही खोजिरहेको जस्तो गरिरहेका थिए । बसिरहेको हाँगोलाई नहल्लाई म आकाशिएँ । उनीहरूको हरेक व्यहोराले मलाई तानिरहेको थियो, अस्तिको ताका ममा जागृत भएको इर्ष्याले पनि होला ।
उनीहरूले बोकेको त्यो लठ्ठीबाट धुवाँ निस्कियो, ड्याम्म…..ड्याम्म…ड्याम्म….को आवाजसँगै पुरै जँगल थर्कमान भइगयो । रुखमा बसेका चराहरू भुर्र..भुर्र उड्न थाले । रुखमा निदाइरहेका बाँदरहरू तर्सिएर भुइँमै झरे । ड्याम्म…..ड्याम्म…ड्याम्म… फेरी आवाज गुञ्जियो र यो पटक गुञ्जियो मान्छे भन्ने जीवको ओहो ! आहा ! र उहु ! पनि । देखेँ, उनीहरूभन्दा केही पर एउटा बाघ घाइते लडिरहेको थियो । नजर फेरि मान्छेतिरै घुमाएँ । यता, मान्छेले आफूले बोकेको लठ्ठी बाघ तिर तेर्स्यायो । कुन्नि के गर्यो उसले लठ्ठिबाट अघिको जस्तै धुँवा निस्कियो । धुवाँसँगै निस्कियो ड्याम्मको आवाजपनि, अघिको जस्तै । उता बाघ अन्तिमपटक गर्जियो । लाग्नु पर्ने त डर थियो सायद तर मेरो मनमा डर कतै थिएन, उडिसकेको थियो अघि उडेका मेरा साथीहरूसँगै । मैले भेटिसकेको थिएँ, एउटा उदेश्य । तय भइसकेको थियो, मेरो यात्रा । जुन जीवदेखि म डराउथेँ त्यही जीवलाई समेत मार्न सक्ने- मान्छे ! जाबो लठ्ठीले बाघ ढाल्न सक्ने मान्छे ! शक्तिशाली हुँदोरहेछ मान्छे । अहो, मान्छे हुन पाए !
यत्तिको तिब्र चाहना अहिलेसम्म जागेको थिएन ममा । म जस्ता कमजोरका लागि बलियो हुनुभन्दा अरु कुनै कुरा ठूलो थिएन र बलियो हुन त मान्छे हुनु पर्ने रहेछ । तर, कसरी हुने त मान्छे ? मसिनो मेरो शरीर त्यागेर अजङ्गको मान्छे बन्ने कसरी ?
समूहकै ज्ञानी, सिपालु परेवा बाजेको सामुन्ने परेर प्रश्न टक्राएँ-
“कुर्र…कुर्र..बाजे, मान्छे…..,।” केही अप्ठ्यारो लाग्यो । कतै केही भनिहाल्ने हुन् कि ? पागल घोषित गरिदिए भने ?
“बाजे……….”मसिनो आवाजमा मैले उनलाई भनेँ-“यो मान्छे कसरी बन्ने ?”
केहीबेर टोलाए उनी । होइन के भन्छ यो भन्ने लाग्यो होला । त्यही पनि, एकछिन गमेर उनले भने-
“मान्छे बन्न त….कुर्र…कुर्र…मान्छे भएर जन्मिनु पर्छ ।”
“ मान्छे नभई जन्मिएकाहरू मान्छे बन्न सक्दैनन् …? .कुर्र…कुर्र..?”
“के भन्छ यो ? मान्छे नभई जन्मेकाहरूलाई किन मान्छे हुनु पर्यो ?” बाजे रिसाए जस्तै लागेको थियो । ‍म केही बोलिनँ । एकछिनको मौनतापछि उनी नै बोले- “….कुर्र…कुर्र….सक्दैनन् ।”
ज्ञानी, जान्ने भनेर सोध्न गएको थिएँ, उनलाई समेत पो थाहा रहेनछ । अरु कसलाई थाहा होला त ? के अहिलेसम्म कसैलाई मान्छे बन्ने रहर जागेको छैन त ? मान्छे बन्ने हुन् भने यिनीहरूले चिलसँग डराउनु पर्दैन थियो । न त डराउनु पर्थ्यो यिनीरुले सर्पसँग नै । बाघ जस्तोलाई त तह लगाउन सक्ने मान्छेसँग चिल र सर्पले के बराबरी गर्न सक्लान् र ? मान्छे बलियो हुन्छ र यो सँसार बलियोको हो । तर किन सम्भव छैन मान्छे नभई जन्मेकाहरू मान्छे बन्न ? कुनै उपाय त होला नि ! खोजे भेटिएला । पहिलोपटक उड्नेबेलामा आमाले भन्नुभएको थियो- “आँटे, सबै सम्भव छ ।” के आँटे भने म मान्छे बन्न सकुँला त ?
“बाजे !….कुर्र…कुर्र… यी मान्छेहरू कहाँ बस्छन् ?
भन्न मन थियो, तपाईंं र तपाईंंजस्ता कमजोरहरूलाई मान्छे कसरी हुने थाहा हुँदो रहेनछ, मान्छे हुन मान्छेलाई नै सोध्नु पर्छ । तर भनेँ-
“मान्छे शहरमा, गाउँमा बस्छन् ।”
अब मसँग एउटा उदेश्य थियो । भिन्न भइसकेको थिएँ म, मेरा साथीहरूभन्दा । मान्छे बन्ने रहर मात्रैले पनि बलवान भएको महसुस गरिरहेको थिएँ । साथीहरू एकाएक कमजोर लाग्न थाले । उनीहरू घर बसाउन व्यस्त थिए र म ? मलाई मान्छे हुनु थियो । मान्छे हुने तरिका मान्छेलाई सोध्नु थियो । मान्छेलाई सोध्न, मान्छेको ठाउँमा जानु थियो । त्यसैले मैले जँगल छोडिदिएँ । साथीहरू छोडिदिएँ । घर बनाएर परिवारसँग जीवन बिताउनु नै हाम्रो मुख्य उदेश्य हो भन्ने मान्यता मैले त्यागिदिएँ । मलाई मेरो उदेश्य यीभन्दा ठूलो लाग्यो । हामी बस्दै गरेको रुखभन्दा ठूलो थियो मेरो संकल्प ।
मान्छेहरूको ठाउँ, यतै मान्छे, उतै मान्छे, मान्छेहरूकै जमात, मान्छेहरूकै ताँती । कुनै एकजानालाई सोधे त भइगयो नि । तर कसलाई सोध्नु ? कुन मान्छेलाई थाहा हुन सक्छ मान्छे हुने तरिका ? तत्काल नसोधी उनीहरूलाई नियाल्ने निर्णय गरेँ ।
दिनहुँ चौतारीमा मान्छेहरूको भिड लाग्थ्यो । आपसमा मिलेर खै कुन्नि के के कुराहरू गर्थे । मैले उनीहरूको कुरा बुझ्न कहिल्यै सकिनँ । म चौतारोमा भएको रुखमा बस्न थालेको थिएँ । यहाँबाट मान्छेहरूको बस्ती देखिन्थ्यो र हरेक दिन भिन्न भिन्न मान्छेहरू चौतारोमा आएर बस्थे । कोही कोही चामलका दानाहरू छरिदिन्थे । अन्य जीव लुछाचुँडी गरी खान्थे तर मान्छे ? मान्छे बाँडेर खाँदो रहेछ । मान्छे अन्य जीव जस्तो त हुँदै होइन । मान्छे बहादुर हुनका साथै दयालु पनि हुँदो रहेछ । मान्छे हुन पाए !
मान्छेहरूको गुँड धेरै काइदाको हुँदो रहेछ । हिँड्नलाई उनीहरू बाकसजस्तो केही प्रयोग गर्दा रहेछन्, आफ्नो खुट्टा समेत चलाउन नपर्ने । आफूले भने खुट्टा पखेटा सबै चलाउनु पर्ने । तर मान्छे उड्न सक्दा रहेनछन् । उड्नु ठूलो कुरा त होइन नि ? बलियो भए पुगिहाल्यो नि किन उड्नु ? अहो, मान्छे हुन पाए !
मान्छे त पुरै जगतको स्वामी रहेछ । हाम्रो अधिनमा के हुन्छ र ? मान्छेको अधिनमा पुरै जगत रहेछ । मैले बास बस्ने रुखपनि उसकै अधिनमा । अस्ति, केही हुल मान्छे आए म बस्दै गरेको रुख ढलाए, टुक्राटुक्रा पारे र लिएर गए । रुख उसैको अधिनमा । खोलानालाहरूमा उनीहरू चाहेका कुरा मिल्काउँदा रहेछन् । खोलानाला मान्छेको अधिनमा । रुख, बोटबिरुवा उम्रिने जमिनमा जमिनकै ढुँङ्गामाटाले बडेमानको गुँड बनाउँदा रहेछन् मान्छेहरू । जमिन पनि उनीहरूकै अधिनमा । भएभरको प्रकृति उनीहरूको मुठ्ठिमा । मान्छे हुन पाए ।
निकै दिनपछि मैले एउटा मान्छेलाई मान्छे बन्ने तरिका बारे सोध्ने निर्णय लिएँ । उसलाई पछ्याउन थालेँ । मैले उसलाई पछ्याएझैं उसले अर्कै मान्छेलाई पछ्याउन थाल्यो । छोटो रौँ भएको त्यो मान्छेले ठूलो रौँ भएको अर्को मान्छेलाई झम्टियो, माथि चढ्यो, मुख छोप्यो र मच्चिन थाल्यो । केही बेर पछि छोटो रौँ भएको मान्छेले लामो रौँ भएको मान्छेको मुखमा आफ्ना हात राख्यो र राखिरह्यो । लामो रौँ भएको मान्छेका खुट्टा चलमलाए चलमलाए र शान्त भए । त्यो दिन जंगलमा देखेको बाघको जस्तै । उसै त मान्छे बलियो जीव, त्यो माथि एउटा मान्छे अर्को मान्छे भन्दा झन् बलियो हुन सक्दो रहेछ । आहा, सबैभन्दा बलियो मान्छे हुन पाए !
ऊ त्यस लामो कपाल भएको मान्छेलाई छोडेर हिँडिरहेको थियो । उसको छेवैमा पुगेँ र भनेँ –
“मान्छे ! मलाई पनि मान्छे हुन मन छ..कुर्र…कुर्र…के गर्दा मान्छे भइन्छ ?”
उसले सुनेन । मतर्फ उसको ध्यान नै गएन । मैले उसलाई बोलाइरहेँ उसले सुन्दै सुनेन । ओहो ! मान्छेलाई मान्छे हुनुको कत्रो घमण्ड ? किन नहोस् त मान्छे घमण्डी, ऊ संसार मुठ्ठीमा राख्ने जीव । मै पनि त घमण्ड गर्दो हुँ मान्छे भइदिएको भए । एकै पटक मतिर हेरिदिए हुने नि यो मान्छ ले ।
“मान्छे…..कुर्र…कुर्र…ओ मान्छे ।”
ए ! यस्तो पो रहेछ कुरा । मान्छे भएको भए यस्तो कुरा अघि नै बुझ्थेँ परेवा जो परेँ किन हत्तपत्त बुझ्थेँ र ? जसरी मैले उसको भाषा बुझ्दिनँ त्यसरी नै उसले पनि त मेरो भाषा नबुझ्ला नि ? किन अघि याद नभएको मलाई यो कुरा ? के अब मैले मान्छेको भाषा सिक्नु पर्यो त ? कसले सिकाउँछ मलाई मान्छेको भाषा ?
थकित, म मान्छेको गुँडमाथि गएर बसेँ । मेरो नजिकै त्यहाँ परेवाको गुँड थियो । मान्छेको गुँडमाथि परेवाको गु‍ँड । अचम्म ! एक जोडी परेवाहरू प्रेममा लिप्त थिए । मलाई उनीहरू देखि घिन लागेर आयो । कस्तो सामान्य उदेश्य भएका परेवाहरू । यद्यपि, मेरो मनमा भने केही बिझे जस्तो भयो । त्यो परेवी..त्यो त त्यहि परेवी हो जसलाई मैले फकाउन खोजेको थिएँ । उसले पनि मलाई देखी । केहीबेर नियाली र बोलाई ।
“……कुर्र…कुर्र…तपाईंं ? धेरै पछि पो भेट भयो त ।”
“हजुर, यसो मान्छेको बस्ती घुम्न आएको ।”
“कस्तो लाग्यो त मान्छेको बस्ती ?”
pegion love from Pinterest
नथाकेको हुँदो हुँ त उडिसकेको हुँदो हुँ । थकित थिएँ त्यसैले उसलाई टार्न खोज्दै थिएँ । उसै त मान्छेलाई मान्छे बन्ने तरिका सोध्न समय लगिरहेको थियो । त्यसमाथि भाषाको समस्या आइपर्यो र अहिले आफूले बधू बनाउन नसकेकी परेवी अर्को परेवासँग भेटिई ।
“ए साँच्चि मैले त चिनाजाना नै गराउन बिर्सेको । ….कुर्र…कुर्र…. उहाँ मेरो श्रीमान ज्याक र म किम्या ।”
उसको नाम किम्या रहेछ । कस्तो नाम हो यो ? अनि श्रीमान भनाउँदोको नाम ज्याक ? कस्तो नाम हो यो ?
“ज्याक…किम्या ?” म अवाक् भएँ ।
“हजुर । पल्लो घरमा बस्ने तक्लुले राखिदिएको नाम ।”
“अनि तपाईंहरूलाई कसरी थाहा भयो त उसले यही नाम राखिदिएको कुरा ?”
ऊ एकैछिन टोलाई भनौँ कि नभनौँजस्तो अनुहार पारेर अन्ततः भनी-
“कुरा के भने नि….कुर्र…कुर्र….हामीलाई मान्छेको भाषा आउँछ ।”
के अरे ? उनीहरूलाई मान्छेको भाषा आउँछ अरे ? मान्छेको भाषा परेवालाई आउने ? के परेवा मान्छे भन्दा ठूला भए ? कि यिनीहरू पनि मान्छे बन्ने तयारी गर्दै छन् ? आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान उनीहरूतिर लाँदै मैले सोधेँ-
“कसरी सिक्नु भयो तपाईंहरूले ….कुर्र…कुर्र….मान्छेको भाषा ?”
उसले सजिलै भनिदिई –
“यो शहरको छेउको जंगलमा एउटा बाँदर बस्छ । उसलाई थुप्रै भाषा आउँछ । भंगेरा, बाघ, खरायो, हात्ति, मान्छे र हाम्रोपनि । हामीलाई उसैले सिकाएको ।”
उनीहरूसँग बाँदरको ठेगाना लिएर भोलिपल्ट म बिदा भएँ । बाँदर सबैभन्दा अग्लो रुखमा बस्दो रहेछ । उसलाई फकाउन सके सिकाउँदो रहेछ, नसके धपाउँदो रहेछ । करिब एक दिनको यात्रा पछि म ऊ बस्ने जंगल पुगेँ । सबैभन्दा अग्लो रुखको सबैभन्दा माथिको हाँगामा ऊ झुण्डिरहेको थियो ।
“बाँदर जी…मलाई मान्छेको भाषा सिक्नु थियो ।”
“मान्छेको भाषा ? किन सिक्नु पर्यो मान्छेको भाषा ।” ऊ अचानक कड्कियो ।
“…कुर्र…कुर्र…धेरै जीवको भाषा जाने बाठो भइन्छ रे । हजुर जस्तै । त्यसैले मान्छेको भाषा सिक्न खोजेको ।”
“बाँदरको सिक्दा हुन्न ?”
“होइन हजुर, मान्छेकै सिक्नु पर्ने । कुरा के भने नि..कुर्र…कुर्र……मलाई हजुर जस्तै बाठो हुनु छ । अनि अर्को मुख्य कुरा मेरो गुँड छेउमा एउटा मान्छे बस्छ । सँधै गुँडमा थुक्छ । दुःख दिन्छ । उसलाई थर्काउनै पनि मान्छेको भाषा सिक्नु छ ।”
ऊ केही सहज भयो र सोध्यो- “अनि मेरो ठेगाना कसले दियो नि ?”
“मेरो एउटा साथीले ।”
“उसैसँग सिकेको भए भइहाल्थ्यो नि ।”
“उनीहरूले भर्खर गुँड बनाएका थिए । दुःख दिन मन लागेन नवजोडीलाई । त्यहिपनि गुरु हुँदाहुँदै गुरुको चेलालाई के गुरु बनाउनु ?”
उसले मलाई मान्छेको भाषा सिकाउने भयो । दिनहुँ म ऊसँग भाषा सिक्न जान्थेँ । गृहकार्यको रुपमा मान्छे बोलेको सुन्नु पर्ने हुन्थ्यो । उक्त बाँदरले मान्छेको भाषा सर्कस भन्ने ठाउँमा काम गर्दा सिकेको रहेछ । उसको मालिक मान्छे थियो रे । मालिकले बोलेकै सुनेर मान्छेको भाषा सिकेको रहेछ । त्यति मात्र होइन उसले त्यहाँ अन्य जनावार जस्तै परेवा, हात्ति, बाघ, भालु,….हरूको भाषा पनि सिकेको रहेछ । तर किन हो उसलाई मान्छे मनै नपर्ने । एक दिन उसको मन चोर्न मन लाग्यो र सोधेँ-
“तपाईंलााई कहिल्यै मान्छे हुन मन लागेन ?”
“मलाई मान्छे मन पर्दे‍न ।” उसको जवाफ ।
“मान्छे घमण्डी हुन्छ । आफूभन्दा कमजोरलाई हेप्छ कुट्छ ।…”
त्यसपछि उसले आफ्ना सर्कसका दिनका कथा -व्यथा सुनाउन थाल्यो । मुर्ख बाँदर । उसलाई थाहा थिएन मान्छे बलवान हुन्छ र त अधिकार जमाउँछ । त्यसैले त मलाई मान्छे हुन मन थियो । ऊ बोलिरहेकै थियो । भन्दै थियो –
“मलाई बरु मेरो पुच्छर मन पर्छ मान्छेको पुच्छर हुँदैन त्यसैले पनि मलाई मान्छे मन पर्दैन ।
“अँ, अँ, पुच्छर..ल सुन मेरो कुरा । मान्छेको पनि हाम्रो जस्तै दुई जात हुन्छ । एउटा पुरुष र अर्को महिला । मलाई मान्छे हुन मन छैन किनभने पुरुष मान्छेको पुच्छर अगाडि हुन्छ र माहिला मान्छेको पुच्छर हुँदै हुँदैन । त्यसैले मलाई मान्छे बन्नु छैन ।”
‘यो बाँदर डाहा गर्छ मान्छेको । त्यसैले उसलाई मान्छे बन्नु छैन । त्यसैले पुच्छरको बाहाना बनाउँछ । यसको र मान्छेको पुर्खा उहि थिए अरे । त्यहाँबाट मान्छे मान्छे भए तर यिनीहरू बाँदर नै रहे । त्यसै डाहले घृणा गर्छ यो बाँदर मान्छेलाई ।’
करिब करिब दुई महिना मान्छेको भाषा सिकेपछि म आफ्नो बाटो लागेँ । मान्छेको भाषामा सामान्य कुराकानी गर्न सक्ने भइसकेको थिएँ । उनीहरू बोलेको कुरा बुझ्न सक्ने भऐको थिएँ । बाँदरले भने अनुसार नेपाली थियो मैले बोल्ने मान्छेको भाषा किनभने नेपालमा थिएँ रे म । ठाउँहरू अनुसार हुँदो रहेछ मान्छेहरूको भाषापनि । मान्छे त चलाख पनि हुँदो रहेछ, बुद्धिजीवि हुँदो रहेछ । अहो, मान्छे हुन पाए !
भोकले रन्थनिएकोले चौरीमा खानलाई केही खोज्दै थिएँ । लाग्यो पहिला केही खाऊँ अनि सोधौँला जे जति सोधे पनि । केही पर मान्छेको गुँडमा एक मान्छे आँखा चिम्लिएर मुर्तिलाई नमस्ते गरिरहेको थियो । नजिकै गएँ । मान्छे बोल्यो-
“चरा हुन पाए कति आन्नदित भएर उड्थेँ । हे भगवान ! मलाई अर्को जन्ममा चरा बनाइदेऊ ।”
के भन्दै थियो यो मान्छे । मान्छे हुनलाई म यति दुख गरिरहेको थिएँ र यो मान्छे भने चरा हुने इच्छा राख्दै थियो त्यो पनि ढुङ्गासामु ? किन मन भएको होला मान्छेलाई चरा हुन ? किन बुझ्दैन ऊ, ऊ सबैभन्दा बलियो जीव हो । सबैभन्दा चलाख जीव हो । सायद, यो मान्छे कमजोर मान्छे हुनु पर्छ, मनमनै सोचेँ ।
त्यो मुर्तिमा केही त थियो । ऊ सायद, बनाउन सक्थ्यो मान्छेलाई चरा र चरालाई मान्छे । नत्र किन झुक्थ्यो त मान्छे त्यो मुर्ति अगाडि । मान्छे जो स्वयम बलवान छ, चलाख छ..किन झुक्दै थियो ढुङ्गासामु ? के मान्छे भन्दा ठूलो पनि केही छ यो संसारमा । मान्छेको त्यो गुँडलाई मन्दिर भन्छन्, बाँदरले भनेको सम्झिएँ । तर मन्दिर भित्रको त्यो मुर्तिलाई भगवान भन्दा रहेछन्, यो कुरो बाँदरले सिकाएको थिएन । के मान्छे भन्दा ठूलो भगवान हो ? कस्तो जन्तु हो यो भगवान ?
निक्कै बेर म त्यहीँ बसिरहेँ । अनेक मान्छेहरू आउँथे झूक्थे, केही न केही माग्थे र जान्थे । हो, मान्छेभन्दा ठूलो भगवान रहेछ । मैले मान्छे हुने रहर जगाएर गल्ति गरेछु । ढिला भएको थिएन । मैले मेरो उदेश्य फेरिदिएँ, अब मलाई भगवान बन्नु थियो ।
खाली पेट कराउन थाल्यो । छेउछाउमा दानाहरू खोज्न थालेँ । पहिला खाना खाने अनि भगवान हुनका लागि अर्को यात्रा तय गर्ने । चरा हुन पाऊँ भनी बिन्ति गर्ने मान्छेले केही पर दानाहरू छरिदियो । मान्छे चलाख, बलवान, दयालु भएर के गर्नु ? झुक्ने यिनीहरू भगवानकै सामु रहेछन् । अहो, बरु भगवान हुन पाए !
निकै माइल उडेर थाकेको र भोकाएको थिएँ । त्यो मान्छेले छरेको दानालाई ठुङ्न थालेँ । एक्कासि, ढ्याम्म्….. आवाजसँगै के‍ही कुराले थिच्यो मलाई । हटाउनलाई बिन्ति गर्न खोजेँ तर गला दबिएको थियो, आवाज आएन । छेवैमा आयो त्यो भगवान सामु अघि भर्खर मात्रै चरा हुन मन हुने मान्छे । ऊसँग अर्को मान्छे पनि थियो । अर्को मान्छेले चरा हुन चाहने मान्छेलाई भन्यो-
“चरा हुनमा के फाइदा छ र ? चरा त बिचरा, मान्छेलाई आहारा ।”
चरा हुन चाहने मान्छेले भन्यो-
“रहर न हो । जे पनि रहर लाग्न सक्छ नि । खैर, आज यो चरा खाने । म चरा हुन त सक्दिनँ तर यसको मासु खाने, यसको पोषण र यसको शरीर हाम्रोमा मिसाउने र यसलाई पनि मान्छे बनाउने ।”
“तँलाई थाहा छ ? हामी यसलाई भगवान पनि बनाउँदै छौं नि ? यसको आत्मा परमात्मामा गएर मिसिन्छ अनि यो बनेन त भगवान । हामी महान छौंँ ।” अर्को मान्छे बोल्यो ।
“हो, हामी महान छौँ ।”
म बिन्ति बिसाउन खोज्दै थिएँ, दुबैजानको हाँसो मेरा कानमा पर्यो । दानवी हो कि मानवी हाँसो हो मैले छुट्टाउन सकिनँ ।..हा..हा..हा..हा…कण्ठबाट चीत्कार निस्किसकेको थियो । मान्छेको आवाजमा मैले उनीहरूलाई बिन्ती बिसाएँ । तर अचम्म भइदियो, निस्कियो मेरै भाषा, परेवाकै भाषा, “….कुर्र…कुर्र….बचाऊ ।” मान्छेको भाषामा फेरि बोल्न खोज्दै थिएँ त्यत्तिकैमा मान्छेको एउटा हात मरो गर्दनमा सलबलायो र……………………
A Dove Dark by Jennifer Stettler Parsons
बाँचेको कथा, नबाँचेको जीवन